Torohevitra momba ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny esofagus | Nutri Diet
Soso-kevitra amin'ny fitsaboana ny aretin-koditra
Fausto Ramirez | | soso-kevitra, fahasalamana
ny spasms ny esophagus na ny aretim-po dia fivontosana hozatra spasmodika ao amin'ny faritra iray amin'ny vavony, mazava kokoa ao an-davaky ny vavony. Rehefa mitranga izany dia mipoitra ny fanaintainana mafy ao amin'ny vavony, izay matetika miteraka fiterahana indray. A aretina Izy io dia misy fiatraikany amin'ny lahy sy ny vavy, fa amin'ny fomba manokana kokoa dia ny vehivavy no mijaly indrindra, ary amin'ny ankapobeny ny olona izay be tahotra na saro-pady be.
Amin'ny ankapobeny, ny antony mahatonga ny spasms ny lalankaniny dia dystonia an'ny rafi-pitabatabana amin'ny haavon'ity faritra ity. Ity aretina ity dia miteraka fahatsapana sakafo voasakana mandritra ny diany. Rehefa mandeha ny fotoana, fanaintainana ary fivontosana lehibe an'ny vavony. Ankoatry ny fanaintainana dia miseho ny maloiloy, fimamoana, mandoa ary fikorontanana.
Mitsabo ny sprasma esofagaly amin'ny fitsaboana voajanahary
Voalohany indrindra dia mila mihinana mangina ary tsy maimaika. Tokony hialana ireo tontolo mampiady saina. Tsy tokony hosotroina koa izy io mandritra ny sakafo, indrindra ny zava-pisotro mangatsiaka sy gazy karbonika tokony hialana.
Fanafody mahasoa hitsaboana fiterahana Izy io dia misy ny fihinanana vola kely isaky ny adiny 3, mandritra ny andro. Tsy maintsy miaraka amin'ny mofo maina ny sakafo satria mitroka ranom-bavony be loatra.
Isan'andro dia mety ny maka infusion miorina amin'ny olon-kendry, mint sy chamomile amin'ny faritra mitovy. Vantany vao vita ilay fangaro, araraka ny eran'ny sotro fihinana ao anaty rano mangotraka iray vera, ary hodi-voasarimakirana. Avelao izy hiala sasatra mandritra ny 10 minitra. Avy eo dia sivana, ary azo ampiana tantely ny tsirony. A mba hampahahendry tsy fahalevonan-kanina, izay no antony tokony handraisana azy aorian'ny sakafo.
Isaky ny maraina amin'ny vavony foana dia tokony handray iray ianao fandroana 5 minitra miaraka amin'ny rano mangatsiaka. Ho an'ny havizanana sy fahakiviana dia tsara ny mandro indroa isan-kerinandro amin'ny hafanana 40 degre. Tsara koa ny mandro amin'ny thyme. Mba hanomanana ity rano ity dia tsy maintsy andrahoina rano iray litatra mandritra ny 3 minitra.
Raha vantany vao lasa io fotoana io dia araraka ao anaty rano ao anaty fandroana ity fampidirana ity. Ity fandroana ity dia tokony haharitra 15 minitra mitazona ny rano amin'ny hafanana tsy tapaka. Ny fandroana dia tokony homena adiny roa, telo na efatra aorian'ny sakafo. Rehefa ao anaty kovetabe fandroana dia ny mety kosehina moramora ny kibo amin'ny alàlan'ny fihetsehana boribory.
Rehefa vita ny fandroana dia kosehina indray ny kibo a lamba famaohana mando anaty rano mafana. Rehefa avy maina tsara ny vatana ary rakotra tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Soso-kevitra amin'ny fitsaboana ny aretin-koditra
Fitsaboana voajanahary hiadiana amin'ny aphonia
Ny filozofia amin'ny fiainana izay manakana ny osteoporose